कसले दिने उत्तर ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
असार ६ गते प्रकाशित ‘सुरक्षित छैन रगत, रगत लिँदा एचआईभी सर्‍यो’ स्वास्थ्य क्षेत्र कति लापरबाही र जोखिमपूर्ण छ भन्ने कुराको पर्दाफास गरेको छ । उल्लेख भए अनुसार १६ वर्षको एक युवक रगत लिएकै कारण एचआईभी संक्रमित भएको खबरले दु:ख लाग्यो । ऊ र उसको परिवारलाई पीडामाथि पीडा थपिएको छ । यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? यस्ता पीडित जो समाचारमा छापिएका छैनन्, आफ्नो पीडा लुकाएर बाँचेका कति छन् कति । के रगत उपलब्ध गराउने संस्था, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारसंँग यो विषयको चासो र जवाफ छ ?